FANEFITRY NY COVID-19 : Mahatratra 370 ireo milahatra isan’andro ao Mahajanga
Filaharambe isan’andro ny tao amin’ny toerana natokana hanaovam-baksiny na “vaccinodrome” ao Mahabibo. 12 octobre 2021
Olona miisa 200 ka hatramin’ny 370 isan’andro no tonga manao vaksiny ao. Eny amin’ny vaccinodrome Mahabibo no anaovana ny vaksiny fanefitry ny covid-19 ho an’ny vahoakan’i Mahajanga voalohany. Eny amin’ny CSB kosa ho an’ny kaominina hafa. Ho an’ny orinasa izay manana mpiasa maro dia azo atao ny maka mpanao vaksiny manatona eny amin’ny toeram-piasana.
Mbola mandehandeha ny virus covid-19, efa tondroin’ny olona ho covid-20 sy 21 arakaraka ny karazana “variants” misy, ka mbola mipetraka hatrany ny fanajana ny hetsika sakana indrindra amin’ny toerana be olona. Tsy misy mpitandro filaminana manery intsony anefa fa fahatsapan-tenan’ny tsirairay no sisa andrasana. Ankoatra izany dia azo lazaina ho navitrika ny mponin’i Mahajanga manao ny vaksiny fanefitry ny Covid.
Mampiantso mpanao vaksiny
Miisa 60 330 ny olona teto amin’ny Faritra Boeny nanao vaksiny fanefitry ny covid-19. Ny 5 014 tamin’ireo dia teto Mahajanga voalohany avokoa. Ny volana mey teo no efa nanomboka ny fanaovana vaksiny andiany voalohany teto Mahajanga satria anisan’ny nahazo vaksiny covishield tamin’ireo 250 000 andiany voalohany nomen’ny OMS tamin’ny alalan’ny Initiative Covax ny 8 mey teo i Mahajanga. Ny covishield moa dia anisan’irony atao hoe générique irony, satria ny laboratoara Astra Zeneca ihany no tompony fa vokarin’ny Serum Institute of India any Inde. Natao ho an’ny 20% -n’ny vahoaka malagasy izy io, ka tamin’ny voalohany dia ireo mpiasan’ny fahasalamana sy ny mpitandro filaminana ary ny mpiasa sosialy niaraka tamin’ireo olona marefo ka anatin’ izany ny olona mihoatra ny 70 taona. Teny am-pandehanana anefa dia nosokafana ho an’ny rehetra ny fanaovam-baksiny satria tsy dia narisika loatra ireo olona natao ho laharam-pahamehana. Noraisina daholo raha vao feno 18 taona ka mazoto hanao vaksiny avy eo. Anisan’ny nentanina natao vaksiny tamin’io andiany voalohany io ny mpanao gazety. Betsaka ihany koa ny orinasa mampiantso mpampanao vaksiny ho an’ny mpiasa ao aminy.
Mbola tsy tonga teto Madagasikara anefa izy io dia efa ratsy laza noho ny vokatra tsy nandrasana hiseho. Anisan’izany ny fivonganan’ny ra ka niteraka fahafatesana tamin’ny Firenena sasany. Iray volana taorian’ny nanombohana ny fanaovam-baksiny dia olona 63 000 ihany no nanao vaksiny tamin’ireo miisa 250 000.
Ny 16 jona dia nanambara indray ny Frantsay fa tsy anisan’ireo vaksiny eken’izy ireo ny covishield, ka tsy sokajiana ho nahavita vaksiny izay nahavita azy rehefa hiditra ny sisin-taniny. Vao mainka niteraka fikorontanan-tsaina tamin’ny Malagasy maro izy io, na ireo tsy handeha any Frantsa aza, satria ny fahatokisana ny vaksiny no olana. “Sao tsy tena vaksiny ity omena ny Malagasy ity”, hoy ny sasany. Ny rantsan’ny Firenena mikambana misahana ny fahasalamana na ny OMS sy ny Vondrona eoropeana na UE anefa no niaraka nanolotra ireo vaksiny ireo tamin’izany. Ny 19 jolay dia nanambara indray ny Frantsay fa ekena ny covishield.
Tsy misy fiantraikany ratsy
Ireo olona taizan’aretina no tena entanina amin’ny fanaovana vaksiny fanefitry ny covid-19. Izany hoe ireo taizan’ny aretina “asma” na asthmatiques, ireo voan’ny diabeta na diabétiques, na ambony tosidra. Amin’ireo olona arivo maro nanao vaksiny dia tsy misy fiantraikany ratsy. Mavesatra fa aretina an-doha izay afaka rehefa mihinana paracétamol, ny miakatra hafanana na mangotsokotsoka izay samy mbola sitran’ny paracétamol avokoa.
88% ny olona nanao vaksiny voalohany no efa nahazo ny vaksiny faharoa eto Mahajanga. Ireo efa nahazo ny vaksiny andiany voalohany covishield ihany mantsy no omena ny andiany faharoa Astra Zeneca. Miisa 4 430 ny efa vita vaksiny andiany faharoa, ny talata teo. Mbola mitohy kosa ny fanaovana ny vaksiny andiany faharoa ho an’ireo efa nahazo ny tsindrona voalohany covishield ary tsy hifarana raha tsy ny faran’ny volana oktobra ity. Ny volana aogositra moa no nambaran’ny mpitondra fanjakana fa nahatongavan’ny andiany faharoa tamin’ny covishield. Tonga tokoa ny andiany faharoa ary Astra Zeneca izay nomen’ny Frantsay tamin’ny alalan’ny “mecanisme Covax” ihany koa no azo. Miisa 200 000 ireo vaksiny nomen’i Frantsa ireo ary notsinjarain’ny Fanjakana amin’ireo toerana rehetra efa nahazo ny vaksiny covishield andiany voalohany.
Tena tian’ny olona ny Janssen
Hatreto dia efa mahatratra 6 980 sahady ny nanao ity vaksiny Janssen ity teto amin’ny Faritra Boeny ary ny 5872 amin’ireo dia eto Mahajanga voalohany avokoa. Ny vaksiny novokarin’i Janssen sy ny laboratoara Johnson and Johnson kosa no vaksiny fahatelo tonga eto Madagasikara ho an’ny daholobe. 342 000 mahery no voalaza fa natolotry ny Amerikanina an’i Madagasikara. Ny Fitondrana frantsay moa dia nanafatra 6000 ho an’ny olom-pireneny mipetraka eto Madagasikara ary nisy ny fandaminana nataon’ireo fikambanana Frantsay amin’ny fanatanterahana ny fanaovam-baksiny azy ireo manerana ny Nosy. Ho an’ny Malagasy kosa dia eny amin’ny toerana mahazatra ihany dia ny tobim-pahasalamana. Mitohy hatrany ny fanaovam-baksiny ho an’ireo rehetra feno 18 taona maniry hanao izany.
Vaksiny mahomby kokoa
Araka ny valim-pikarohana voalohany azo tamin’ny fizahana ny fahombiazan’ ny vaksiny miady amin’ny covid-19 izay nivoaka ny 11 marsa 2021 teo dia ny vaksinin’i Pfizer sy BioNTech BNT162b2 aloha no manana taham-pahombiazana ambony indrindra izay 95,0%. Ny Coronavac an’ny Sinoa kosa no manana ny taham-pahombiazana ambany indrindra 50,0%. Mitovitovy amin’ny ambony indrindra ihany ny an’ny Moderna satria mahatratra 94,5%. Ny AZD1222/covishield an’ny oniversiten’i Oxford sy Astra Zeneca izay ampiasaina eto amintsika kosa dia 82,4% ny taham-pahombiazany. Ny an’ny Johnson and Johnson kosa dia 71,2%.
Marihina anefa fa samy mbola vaksiny vaovao daholo izy ireo, ka mbola mitohy ny fitsirihana ary valim-pikarohana vonjimaika ireo azo ireo.
Na izany aza dia miezaka manohy ny hetsika sakana ireo sehatra samihafa sy ny olon-tsotra mba tsy hiparitahan’ny aretina indray.
Miavaka ny hetsika sakan’ny Arc en ciel
“Tsy maintsy manao arovava-orona ny mpianatra rehetra. Tsy maintsy manana tsiranoka famonoana otrikaretina na gel hydroalcoolique ny mpianatra tsirairay ary misy rano sy savony hanasana tanana eo an-tokotany”. Ireo no nambaran-dramatoa Daudine tompon’andraikitry ny sekoly Arc en ciel Bostany tamin’ireo ray aman-dreny tamin’ny fidiran’ny mpianatra teo. Ny volana septambra no niditra ny ankamaroan’ny mpianatra eto Mahajanga rehefa niala sasatra nandritra ny efatra ka hatramin’ny enina herinandro.
Betsaka anefa ny mpiala sasatra tonga teto Mahajanga ary tsy tazana intsony ny fanajana ny hetsika sakana ka nahatonga ny olona maro hiahiahy ny hiverenan’ ny fiakaran’ny tahan’ny marary. Tsy nisy anefa ny natahorana ka dia nitohy tsara ny fampianarana saingy nametraka hatrany ny fanajana ny hetsika sakana ity sekoly iray ity. Tsy mahazo miditra an-tsekoly raha tsy mitondra arovava-orona ary tsy esorina izany ao am-pianarana. Asaina manasa tanana matetika amin’ny gel hydroalcoolique ihany koa mandritra ny ora fampianarana. Hatreto aloha dia tsy mbola nisy trangana covid tao amin’ny sekoly, araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra.